Baby ịsa ịkpọ òkù sụgharịa, n'omume, Kwuru
> Resource> Atụmatụ> Gịnị dee na gị Baby ịsa ịkpọ òkù
Ihe na-Dee na gị Baby ịsa ịkpọ òkù
Baby ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù dị oké mkpa iji a nwa ịsa ọzọ. Ọbịa na-kpọrọ site na akwụkwọ ịkpọ òkù. Ọ dịghị akwụkwọ ịkpọ òkù, ọ dịghị ọbịa ... na ọ dịghị ọzọ. Ọ dị mfe na-eme mmehie na ihe ma ọ bụrụ bụghị ihe niile, dị ka na-ezighị ezi adreesị, ikpo emehie, ọ bụghị n'ụzọ zuru okè e biri ebi, wdg Ndien akpa erughị ala nwere ike ịbụ nwa ịsa òkù sụgharịa ya. Ọ bụ ya mere e nwere ndị dị otú ahụ a na peeji nke maka nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa echiche. Ya mere, dị nnọọ were ya mfe. Baby ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù pụrụ ịbụ bụghị na ike. Ọ bụrụ na ị bụ onye na aghụghọ nwaanyị, ị pụrụ ọbụna ime ka nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù onwe gị.
Isiokwu a ga-eso nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa echiche na gị, ekpuchi nwa okoro na nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa, girl ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù sụgharịa, na sụgharịa maka ejima nwa na di na nwunye nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù.
Baby ịsa ịkpọ òkù sụgharịa Ideas
Tupu sụgharịa nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù, buru n'uche na ozi a dị mma na-agụnye.
1.A mara mma nwa ịsa okwu, amaokwu, ma ọ bụ uri.
2.General ọmụma banyere expectant nne, na / ma ọ bụ nwa aha na / ma ọ bụ okike.
3.An agba nke nwa showery.
4.Times, ụbọchị, ọnọdụ nke nwa showery.
5.The usu nwa ịsa na RSVP nọmba ekwentị.
6.Provide ọ bụla nwa ndekọ na nne na-abụ nwere. Dịghị mkpa ka nwa ọhụrụ ahụ ịsa.
Baby Boy ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Ekwela ka ihe ọ bụla pink
naanị ịzụta ihe-acha anụnụ anụnụ
ọhụrụ ahụ nwa nwoke
bụ nnọọ banyere ruru Jikọọ anyị n'ihi na a Baby ịsa asọpụrụ Dirk Smith nwa Karen Smith Saturday, 24th June na 11:00 am Clyde si Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia
Baby Girl ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Welcome to a Ụwa.
The dum obosara ụwa
na-echere gị Birth! Bịa sonyere anyị na-eme ememe Julie Smith na-abịanụ Baby Girl! Saturday, 24th June na 11:00 am Clyde si Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 8332 Leesburg Pike Vienna, Virginia RSVP Sera Jones 111- 000-5555 Julie na-aha na Baby Boutique
Ejima Boy ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Ọ dịghị otu onye, ​​ma ụmụ abụọ na-abịa n'oge na-adịghị
Ka enyere mama m na papa icho mma n'ọnụ ụlọ ha.
Biko sonyere anyị maka a Ejima Baby ịsa asọpụrụ
Jacky na Berry Givens
Saturday, 24th June na 11:00 am
Clyde si Ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Di na nwunye Baby ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Jennifer na Robert Smith si
nwa ọhụrụ bụ na ụzọ
Ka-esi na ha njikere
maka nnukwu ụbọchị!
Ị na-òkù a Baby ịsa!
24 June na 1:00 pm
Vienna, Virginia RSVP Sera Thomas 111-000-5555
Christmas Baby ịsa ịkpọ òkù sụgharịa
Cocktails, Cradles na Ezumike bụ'abụ
N'oge na-adịghị Tony Simperson a ga-enwe!
Jikọọ anyị n'ihi na a Ezumike Baby ịsa
Vienna, Virginia Alojado na ịhụnanya site: Jane Jones RSVP 111- 000-5555 Julie na-aha na ebe
Mgbe izipu nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù
Ọ dị mkpa ka zipụ nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù 4-5 izu n'ọdịnihu. Ya mere, ọbịa ga-enwe oge zuru ezu ịzụta nwa ịsa onyinye, na ọ na-efu oge ụfọdụ zipuru nwa ịsa akwụkwọ ịkpọ òkù ka ọbịa, karịsịa ndị na-bi n'ebe dị anya site na obodo. Ọ bụ na-a oge nchekwa na-eso ya na ọbịa iji email ma ọ bụrụ na i nwere ike inwe ha email zitere gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a nwa ịsa video òkù, na-agbalị ndị dị ike ngosi mmịfe onye - DVD ngosi mmịfe Nrụpụta.
Olee otú Mee Ahaziri Baby ịsa ịkpọ òkù
Nwa ọhụrụ Baby Checklist: Time iji nweta ihe niile Njikere
N'onwe Baby Daalụ Kaadị igosipụta n'Ekele
Olee otú Mee Pụrụ iche mmeghari Nri abalị ịkpọ òkù
Wedding Ọbịa Book: Mee ka a Pụrụ iche Ọbịa Book maka Wedding N'ikuku
Ụbọchị ọmụmụ Scrapbook Ideas - Mee Birthday Photo scrapbooks